गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता | INRA ONLINE MEDIA
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार न्यायोचित व्यवस्था, कानूनको राज र सुशासनका साथ अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ । राजधानीको धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यायमा एमाले प्रचार विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण टुंगिएको भन्दै अब समग्र सामाजिक परिवर्तनको कामले तीब्रता पाउने बताउनुभयो । उहाँले मुलुक बिस्तारै समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रको दिशामा लाग्ने बताउनुभयो ।
मुलुकमा ३६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले त्यसलाई शुन्यमा झार्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गरिबीबाट समृद्धि, पछौटेपनबाट अगाडि, प्रविधि बिहीनबाट प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, अधिकतम घाटालाई सरप्लस तिर लैजान्छौं । युवाहरुलाई विदेश जानु नपर्ने, स्वदेशमा बस्ने वातावरण बनाउँछौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सामूहिक लोकतन्त्रको रुपमा देशलाई अगाडि बढाउने भन्दै समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रतिर अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, तर कोही कोही गरिबलाई पनि धनी बनाउने भन्दा आत्तिन्छन् । बाटो छादैछ गरिबले पनि गाडी कुदाउँछ भन्दा कुदाइ रहेकालाई किन पिर ? चुलो जसको बलेको छ, गरिबकोमा पनि बल्छ भन्दा किन पिर पर्‍यो ? कसैको खोस्ने भनेको छैन । किन आत्तिन्छन् कोही कोही ?’
लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मुल गर्ने कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । बहस र विवाद मात्र होइन, तीन वर्षभित्र अल्पविकसितबाट नेपाललाई विकासिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने भन्दै उहाँले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक विकासमा मित्र राष्ट्रहरुलाई पनि साथमै लैजाने समेत बताउनुभयो । छिमेकी देशहरुसँग सन्तुलित, विश्वसनीय, पारस्परिक सम्बन्ध अगाडि बढाउने र विकासमा छिमेकीलाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
अर्को प्रसंगमा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले दुई वामपन्थी दलबीच एकता भएरै छाड्ने दाबी गर्दै हल्लाका पछाडि नलाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बृद्धि
बीपी प्रतिष्ठानले गरेको एमआरआई टेण्डर रद्ध, अख्तियारद्धारा छानबिन जारी